सुरक्षा मापदण्डबीच परीक्षा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जानकारी - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार सुरक्षा मापदण्डबीच परीक्षा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जानकारी
सुरक्षा मापदण्डबीच परीक्षा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको जानकारी
बोर्डले यस पटक कक्षा १२ को परीक्षामा एक बेन्च, एक विद्यार्थीको नीति लागू गराउनेछ । यसका साथै एउटा कक्षा कोठामा बढीमा २५ भन्दा बढी विद्यार्थी राखिनेछैन भने परीक्षा केन्द्रमा पनि एक दिनमा १५० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सहभागी नगराइने भएको छ । यसबाट परीक्षामा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने अध्यक्ष पौडेल बताउनुहुन्छ । सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी हुने अनिवार्य विषयका दिन उपपरीक्षा केन्द्र राख्न पाउने सुविधा बोर्डले परीक्षा केन्द्रहरूलाई दिएको छ । परीक्षा केन्द्र नजिकैको विद्यालय, कलेजमा उपपरीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिनेछ । केन्द्रमा विद्यार्थीको भीडभाड न्यून होस् भनेर यस खालको प्रबन्ध मिलाइएको बोर्डले जनाएको छ । यसका साथै परीक्षा केन्द्रमा मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य गराइनेछ भने विद्यार्थी, शिक्षकलाई हात धुने प्रबन्धसमेत मिलाउनुपर्नेछ ।
विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसको कुनै शङ्का लागेको भए अलग्गै कोठामा राखेर परीक्षासमेत लिइनेछ । शङ्का लागेका विद्यार्थीलाई मात्र अलग्गै आइसोलेट गरेर परीक्षा लिइने जानकारी उहाँले दिनुभयो । विद्यार्थीले सङ्क्रमणकै कारण परीक्षा दिन नपाउने अवस्था भए नियमित परीक्षा सकिएपछि पुनः परीक्षा लिइनेछ । कोरोना लागेकै कारण पनि विद्यार्थी परीक्षाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यी विद्यार्थीको परीक्षाफल पनि नियमित विद्यार्थीसँग एकसाथ गरिनेछ । यसका साथै कोरोना लागेका कारण परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीले होम सेन्टरबाटै परीक्षा दिनसमेत पाउनेछन् । अन्य विद्यालयमा परीक्षा दिन जान सम्भव नहुने भन्दै होम सेन्टरको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
बोर्डले समग्र शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने गरी परीक्षा स्थगित गर्न नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । विगतमा पनि आफूहरूले सङ्क्रमणकै बीचमा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गरेको र त्यसले विश्वविद्यालय तहको स्नातक तहको शैक्षिक सत्र सुचारु हुन पुगेको उल्लेख गर्दै यस पटक पनि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित पार्न नहुने अध्यक्ष पौडेलले बत(ाउनुभयो । बोर्डको कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा लिन सकिए दशैँसम्म नतिजा प्रकाशित गरी तिहारपछि स्नातक तहको कक्षा सुरु हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन परीक्षामा सहभागी हुने सबै विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई खोपको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
Previous articleअपि पावरको २ लाख १५ हजार कित्ता सेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम मौका
Next articleयी नदीमा आज बढ्ने छ पानीको बहाव, सतर्क रहनआग्रह